Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu New high-speed, oololiwe umda cross kuqhubeka ukuvula imigca kwihlabathi lonke. Ngaphezu, zaphantse njalo ibethe uhambo ngomoya ngokuphathelele intuthuzelo, inzuzo, nesantya yokuhamba. Kule ndawo, kukho uthungelwano kaloliwe ngakumbi nangakumbi ehlabathini lonke! Wonke ngubani koololiwe umda cross…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu IYurophu igcwele ubugcisa, imbali, nenkcubeko. Akukho nto ke akumangalisi ukuba nayo ekhaya le kwelanga best. Nge Gcina A Isitimela, uhambo konke malunga uhambo, akuhlali kuyo. ke, hlala phantsi uphumle kwaye ubekhona…
yi UChris Johns
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ngeminazana ithile, xa ibhajethi akazange adlale indima ngokukhetha zokufikela (okanye ubuncinane, hayi njengento enkulu indima!) izinto lula; kule mihla, ukuba sifuna ukuhamba, kufuneka silumke ngendlela esiziphatha ngayo…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ukuphazamiseka kunye nexesha lokuchitha ixesha kwimigca yokungena kwisikhululo seenqwelomoya kunye nokuxinana kwezithuthi kwisikhululo seenqwelomoya konke kuyaziwa ngabahambi beshishini. Nokuba uya kuhambo olufutshane loShishino ngololiwe okanye olude oluya kuthatha uninzi…